Razer Blade Stealth na Razer Core V2, nke kachasị ọhụrụ na egwuregwu | Akụkọ akụrụngwa
Ndị na-egwu egwuregwu vidio nwere ihu ọma n'ihi na n'oge na-adịbeghị anya, ekpughere ngwaọrụ ọhụụ sitere na otu ụlọ ọrụ na-elebara anya na mpaghara egwuregwu na ụwa niile: Razer.
Betsdị nzọ dị otú ahụ na-ezo aka a mbipụta ọhụrụ nke Razer Blade Stealth 2017 (ụdị dị mma nke usoro gara aga) na Razer Core V2, ọgbọ nke abụọ nke GPU nke mpụga.
1 Raụwa Stealth 2017
Raụwa Stealth 2017
El Raụwa Stealth 2017 bụ a variant nke quad isi nke ụdị mbụ nke, oge a, ga-akụ ahịa na a Ọgbọ nke asatọ Intel Core i7-8550U processorn na batrị onye ndu ya gbatịworo.
Na Razer Blade Stealth 2017, nke na-agbakwunye ihuenyo 13-inch na mma Quad HD + Site na mkpebi 3200 x 1800 pixel, ụlọ ọrụ ahụ gụnyere a IGZO ihuenyo mmetụ na 100% sRGB agba. Ngwaọrụ a na - arụ ọrụ ọsọ ọsọ Turbo Boost ruo 4 GHz nke soro 16 GB nke ebe nchekwa ebe nchekwa abuo abuo, ihe ncheta nke, dika Razer si kwuo, bu n'obi iji mee ihe maka "ime otutu ihe."
Min-Liang Tan, Co-guzobere na CEO nke Razer, kwuru, sị, “Ndị injinia anyị emeela ihe dị ịtụnanya na Blade Stealth ọhụrụ site na ịbawanye ụba na ịgbatị ndụ batrị. Ọhụrụ Blade Stealth bụ laptọọpụ Windows zuru ezu zuru okee, ma nwee ike tukwasi obi na enyemaka nke ohuru Razer Core V2 ″.
El Razer Core V2 bụ ọgbọ nke abụọ nke GPU nke ika ahụ, ngwaọrụ nwere ikike ịgba ọsọ na GPU dịka usoro NVIDIA GeForce 10 na usoro AMD Radeon 500 (yana XConnect). Razer Core V2 na-akwado GPU na a wuru na 500W ike ọkọnọ mgbe nhazi eserese maka laptọọpụ jikọtara 3 Thunderbolt (USB-C).
Razer Core V2 nwere njikwa nke ya nwere akara dị iche iche maka eserese na ngwaọrụ ejikọrọ, anọ USB 3.0 ọdụ ụgbọ mmirinakwa otu Gigabit Ethernet n'ọdụ ụgbọ mmiri. Ejiri ngwaọrụ dum mee ka CNC kpochaa aluminom.
Razer Blade Stealth 2017 ga-adị ozugbo na ọnụahịa nke $ 1700 site na ụlọ ahịa n'ịntanetị Razer na United States, France, Canada, United Kingdom na Germany. Razer Core V2 "ga-ebufe n'oge na-adịghị anya" ọ ga-efu ihe ruru $ 500, dịkwa na ụlọ ahịa n'ịntanetị Razer.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Noticias » Razer Blade Stealth na Razer Core V2, nke kachasị na egwuregwu
Microsoft Mkpa Book 2, definitive laptọọpụ-alụ ọgụ megide MacBook Pro